अटेर लुम्बिनी मेडिकल कलेज, निरीह प्रशासन–लाचार जनप्रतिनिधी – E Kutumba
By ईकुटुम्ब	 Last updated Apr 3, 2020 0
नारायण न्यौपाने,पाल्पा-चैत्र २१,कोरोना नियन्त्रणका नाममा पटक पटक औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठक भएका छन तर तीनको नतिजा बिरामीले उपचार पाउनेमा देखिएको छैन । शनिवार बगनासकाली गाउँपालिका २ पोखराथोकका एक जना बिरामीलाइ मेडिकल कलेजले एम्बुलेन्सबाटै फर्काइदियो । त्यसपछी दवाबमा परेको कलेजले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको बैठकमा माफि माग्यो र आइन्दा त्यसो नगर्ने पर्तिबद्वता जनायो । तर त्यसको एक साता नबित्दै कलेजले बिहिवार माथागडी गाँउपालिका ४ झडेवाका २० वर्षीय बिश्णु सारुलाई उचित उपचार एवम पारामर्श नदिइ घर फर्काइ दिएको छ । ‘म बिहिवार साँझ मेडिकल कलेज आएको थियँ, ज्वरो आएको थियो, मलाइ गारो भएको छ भनेर डाक्टरलाइ भनँे तर बस्नु मिल्दैन भनेर गएको हँु,’ फेरी अर्को दिन बिहान ज्वरो आएपछी मेडकल कलेज आएका सारुले भने,‘ म लुम्बिनीमा एउटा होटलमा काम गर्दथेँ त्यो सुनेपछी भर्ना गर्न आनाकानी गरियो । उनी चैत्र ६ गते घरमा आएका थिय । बुधवारबाट बिरामी परेका बिश्णुका बुवा ५२ बर्षिय चन्द्रबहादुर पनी हिजो देखी ज्वरोका कारण बिरामी परेका छन ।
उच्च ज्वरो आएका कारण आँफुले मेडिकल कलेजको आइसोलेसनमा उपचार गर्न ठिक ठानेर पढाएको माथागडी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य कर्मी याम बहादुर चिदीले बताए । सुविधा सम्पन्न भनिएको अस्पतालले बिरामी प्रती गरेको ब्यावाहारले चिन्तीत बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष थापाले बताए । उनले भने, ‘हामिलाइ झन टेरेनन् के नै पो गर्न सकिन्छ र ? फेरी उनिहरुको अनुरोधमा पालिकाले एम्बुलेन्सको ब्यावस्था गरेर पढाएका छौँ, त्याहाँ राम्रो ब्यावहार नभए बुटवल लैजाने भन्ने बिषयमा सल्लाह भएको छ ।’ तर मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. राजु शाक्यले उनको अवस्था सामान्य रहेकोले घर पठाइएको जनाएका छन् । आक्रोसित मुहारमा प्रस्तुत हुँदै उनले भने,‘ अझै सम्म हामि संग पिपिइ छैन, हामी आफै बनाएका छौँ, अहिले हामि अवस्था हेरेर उपचार गरेकै त छौँ नी ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव सुवेदीले अस्पतालबाट पटक पटक बिरामी फर्काइएको घटनामा कुनै एक्सन लिन सकेका छैनन् । उनले बिरामीको चाहनाले नै समस्या भएको भन्दै मेडिकल कलेजलाइ ओतेका छन । ‘कलेजले भर्ना गर्नु नपर्ने नदेखेर नगरेको तर बिरामीले भर्ना हुन चाहेको देखिन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘याहाँ ग्याप छ, बिरामीले बाहिर गयर अरु भन्ने गरेको हो की ? मेडिकल टिमले काम गरेको छ यस्तो हुँदा उनिहरुलाइ तनाव हुन्छ ।’
मानव अधिकार कर्मीले मेडिकल कलेजले बिरामी प्रती गरेको ब्यावाहार खेद जनक भएको बताएका छन । राष्ट्यि मानव अधिकार सरोकार केन्द्र पाल्पाका अध्यक्ष दिवाकर पाण्डेले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै निजी अस्पताल कर्तब्य प्रती बिमुख भएकोमा ध्यान केन्द्रित भएको जनाउदै सरोकारवाला पक्षलाइ कानुन बमोजिम कारवाहीको माग गरेका छन ।
बिरामी फर्काइएका घटना प्रती प्रदेश सांसद नारायण आचार्य, बिरबहादुर राना, डा पुरनमान बज्राचार्य पटक पटक बैठकमा छन तर उनिहरुले बैठक बस्ने बाहेक कुनै भुमिका गर्न सकेका छैनन । समन्वय गर्ने भुमिकामा आफु नचुकेको र सचेतनाका कामहरु गरेको प्रदेश सांसद नारायण आचार्यले बताए । यस्तै तल्लो स्तर सम्मका जनतालाइ सरकारको अनुरोध स्वीकार गरी सहयोग गर्नु पर्ने सन्देश दिने काम गरेको अर्का सांसद बिर बहादुर रानाले सुनाय । त्यस्तै डा. पुरनमान बज्राचार्यले केही बैठकमा आफु गएको र धेरै थाहा नभएको बताए । तर स्थानिले, जनप्रतिनिधीले बिरामीले उपचार सम्म पाउन नसकेको समयमा कुनै प्रबन्ध गर्न नसकेकोमा आक्रोस ब्याक्त गरेका छन । ‘जन प्रतिनिधीको काम केहो ? के उनिहरु मेडिकललाइ उपचार गर्दे भन्दै सधै धाउने हो ? गलत गर्नेलाइ कानुन छैन ? हाम्रा नेता किन पछि लागिराछन् यसमा रहस्य छ,’ एक स्थानियले भने,‘ समन्वय गर्ने मानिस कमजोर हुनुको नतिजा हो, अस्पतालले उपचार नगर्नु यो लाचारी पन हो ।’